Global Voices teny Malagasy » Haiko tahaka ny araben’i Beirota ny araben’i Parisy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Novambra 2015 4:42 GMT 1	 · Mpanoratra Joey Ayoub Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Andrefana, Frantsa, Libanona, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Sary namboarina nifampizarana ho firaisan-kina amin'ireo lasibatry ny fanafihana tao Paris.
Avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpiteny frantsay mahazo tombontsoa manokana ao Libanona aho. Nidika izany fa noheveriko ho tanindrazako faharoa hatrany i Frantsa. Tsy manavahiny ahy tahaka ny araben'i Beirota ny araben'i Parisy. Vao andro vitsivitsy lasa aho izay no tao Parisy.
Nisy alin-kerisetra nampohoron-koditra roa niseho vao haingana. Ny voalohany nanaisotra ain'olona nihoatra ny 40 tao Beirota, ny faharoa naka ain'olona mihotra ny 120 tao Parisy ary mbola tsy nitsahatra ny fanisana.
Hitako mazava tamiko ihany koa fa amin'izao tontolo izao, tsy misy lanjany aminy loatra tahaka ny fahafatesan'olona tao Parisy ny fahafatesan'ny vahoakako tao Beirota.
‘Izahay’ tsy nahazo bokotra fa tsy naninona tao amin'ny Facebook (“SafetyCheck”). ‘Izahay’ tsy nahazo fanambarana alimbe avy amin'ireo lehilahy sy vehivavy matanjaka indrindra sy avy amin'ireo mpiserasera an-tapitrisany.
‘Izahay’ tsy manova ny politika (fanaovan-dalàna) izay hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ireo mpifindramonina tsy manantsiny tsy voaisa.
Tsy misy mazava kokoa ankoatra izay.
Nilaza izany tsy manana lolompo aho, fa noho ny alahelo fotsiny.
Sarotra dia sarotra vao mahatsapa fa voasoratra izany, amin'ireo fomba fiteny avy amin'ny fisainana liam-pandrosoana rehetra izay ezahintsika atsangana ho toy ny feon'ny zanak'olombelona tafaray, ny ankamaroantsika mpikambana ao amin'ity karazana ity, dia mbola voahilikilika avy amin'ny fanahiana manjaka eto amin’ “izao tontolo izao”.
Ary fantatro fa amin'ny hoe ‘izao tontolo izao’, na izaho tenako aza dia tsy tafiditra amin'izao tontolo izao. Satria izay no fomba fiasan'ny rafi-pahefana.
Tsy manan-danja aho.
Tsy misy lanjany amin’ “izao tontolo izao” ny ‘vatako’..
Raha maty aho dia tsy hanova na inona na inona izany.
Averiko indray, milaza izany tsy misy lonilony aho.
Zavamisy fotsiny izany filazana izany. Zavamisy politika, marina, fa zavamisy na izany aza.
Angamba misy lonilony ihany ato anatiko ato, fa reraka loatra aho.Zava-mavesatra be izany rehefa tsapa.
Fantatro fa tsara vintana ihany aho fa hotsaroan'ny namako sy izay tia ahy aho rehefa maty. Angamba aza ny blaogiko sy ny fisiako antserasera dia mety hahavory eritreritra avy amin'ny olona manerana izao tontolo izao. Izay no hakantony aterineto. Ary eny fa na izany aza dia tsy tratran'ny besinimaro dia maro.
Tsy mbola niharihary tamiko tahaka ny ankehitriny raha takatro ny nosoratan'i  Ta-Nehisi Coates rehefa niteny ny Vatana Mainty tany Amerika izy. Mieritreritra aho fa misy ny tantara mila lazaina amin'ny Vatana Arabo ihany koa. Ny Vatana Amerika Vazimba Teratany. Ny Vatana Indizeny. Ny Vatana Amerikana Latina. Ny Vatana Indiana. Ny Vatana Kiorda. Ny Vatana Pakistaney. Ny Vatana Shinoa. Ary ireo vatana hafa maro dia maro.
Iray ny Vatan'Olombelona. Tsapa tokoa fa tokony ho izany izy io manomboka izao. Angamba mety ho alonalona ihany izany ao anatiny ao. Saingy angamba alonalona mila tandrovina satria raha tsy misy hetaheta ho amin'izany maha iray ao amin'ny faritry ny vatana zany, dia tsy azoko antoka hoe karazana izao tontolo izao manao ahoana moa no iainantsika ankehitriny.
Misy ireo vatana mahasehaka izao tontolo izao, saingy maro kosa ny vatana mitoetra ho ao an-toerana, na ao amin'ny faritra, na “ara-poko” ihany.
Ny eritreritro dia miaraka amin'ireo lasibatra tamin'ny fanafihana nampihoron-koditra nitranga zoma sy alakamisy teo, ary ny eritreritro miaraka amin'ireo rehetra ampijalian'ny fanavakavahana henjana dia henjana vokatry ny hetsika nataon'ireo vitsy mpandripa-bahoaka sy ny tsy nahavitan'ny zanak'olombelona hijery ny tenany ho singa iray tafaray.
Ny hany fanantenako dia ny hampatanjaka antsika tsara hanao izay mifanohitra amin'ny tadiavin'ireo mpamono olona ireo. Tiako ny ho be fanantenana hilazako fa tonga any isika, na aiza na aiza izany “any” izany.
Mila miresaka ireo zavatra ireo isika. Mila miresaka Hazakazaka [ na Foko avy amin'ny teny anglisy hoe Race] isika. Mila manao izany fotsiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/15/76682/